Askari Itoobiyaan Ah Oo 7 Sanadood Kasoo Dagaallamay Soomaaliya Ayaa Ka Sheekeeyay Xaaladda Adag Ee Ka Jirta Wadankiisa WARBIXIN. – Bogga Calamada.com
April 21, 2017 5:18 am Views: 186
Warbixinta ayaa sheegaysa in xaalad quus ah ay kajirto magaalooyinka gobolka Amhara kadib markii howlgallada raafka ah oo ay fulinayaan ciidamada ammaanka Â ay noqdeen kuwa joogta ah.
Askariga oo magaciisa kusoo gaabiyay Tafase ayaa sheegay Â in dadkiisa ay dilayaan ciidamada dowladda isagoo hadlayay ayuu yiri “Sidee Askari ku noqonaysaa adigoo dilaya shacabkaagii hadaba waxaa tahay Argagaxiso”.
“Waxaan ahaay Askari shacabkiisa ilaaliya balse xukuumadda ayaa idayacday kadib 7 sanadood oo aan kasoo dagaallamay dalka Soomaaliyaâ€ ayuu hadalkiisa sii raaciyay Tafase oo quus ka muujinayay xaaladda uu marayo wadanka Itoobiya.
Shabakadda ISP-PressÂ oo warbixinta diyaarisay waxay sheegtay in magaalada Gonder ee qowmiyadda Amxaaradu degto uu saameeyay Bandawga ay dowladda Itoobiya soo rogtay, faqriga ayaa daashaday bulshada halka dhalinyaradu ay ka sheeganayaan shaqa laâ€™aan baahsan waxaana gaabis ah adeegyadii ay qaban jireen xafiisyada dowladda.
James Jeffrey oo ah saxafiga la kulmay askariga Itoobiyaanka ah ee Soomaaliya kasoo dagaallamay ayaa Â sheegay in Tafasa isagoo Baaga muuddo ah oo qabatoomay maandooriyaha khaatka uu dhax wareegaysanayo magaalada Gonder oo ah magaalo ku kacdoontay taliska Addis Ababa.